Maxay hurdo u qabtaa raga galmada kadib? | Gaaloos.com
Home » galmada » Maxay hurdo u qabtaa raga galmada kadib?
Maxay hurdo u qabtaa raga galmada kadib?
Waxa laga yaabaa in aad iswaydiinayso maxuu u seexanayaa, adiguna aad doonasyo in uu kula sheekaysto. Hore ayaa waxa in badan looga hadlay, loo qoray muhiimada ay leedahay isfahanka, isu soo dhawaanta, dhunkashada, iyo isa salaaxida inta aan galmada la bilaabin. Taas oo la odhan karo in ay tahay hordhaca ciyaarta, kadibna ay ku xigto howsha dheer ee is dhexgalka ee wada raaxaysig oo ayaduna ah marka raaxaysigu marayo meel dhexe. Ugu dambayntiina ay haboon tahay in wada raaxaysiga lagu dhameeyo gabagabo.
Rabitaanka ay haweenaydu rabto in ay la jiifto ninka kadib xiliga ay wada raaxaysteen ayaa waxa dhici karta in ay rabto in uu ninkeedu raadsan naag kale. Iyo seexashada uu ninku si dhaqso ah u seexanayo ayaa ayaduna waxa ugu wacan in aanu ninku rabin in uu la yeesho wax wada hadal ah lamaanihiisa oo ku saabsan ilmo iyo qoys.
Title: Maxay hurdo u qabtaa raga galmada kadib?